Santiago ၏ပြင်သစ်လမ်း: စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမှတ်တိုင်များ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | လမ်းပြ
ဘုရားဖူးခရီးသည်များအသုံးပြုသော Camino Frances de Santiago သည် Jacobean လမ်းကြောင်း။ ၎င်းသည်သမိုင်းတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးသမိုင်းဝင်အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည် 'Codex Calixtino', ဒွါဒသမရာစုအတွင်းရက်စွဲပါနှင့်ဘုရားဖူးအကြောင်းကိုရေးထားပြီသောသူအပေါင်းတို့၏အရေးအပါဆုံးကျမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် စန်တီယာဂိုက de Compostela.
အဆိုပါ Camino က de Santiago Frances ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု San Juan က de Pie de Puertoဥရောပ၌အရေးအကြီးဆုံးသောဂျိမ်းကင်လမ်းကြောင်းများရောက်ရှိသည့်ဂယ်လစ်အောက်ပိုင်းနာဗာရာ၌ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဒဏ္forာရီအဘို့အစပိန်ရိုက်ထည့်ပါ Rocesvalles pass နှင့် Iberian ကျွန်းဆွယ်မှတစ်ဆင့်တမန်တော်၏မြို့တော်သို့ရောက်ရှိသည်အထိ။ ကြည့်ရအောင် မင်းကိုလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကလှပတဲ့သမိုင်းဝင်မြို့တွေ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများနှင့်မမေ့နိုင်စရာခရီးတစ်ခုပါ။
1 Camino de Santiago Francés - ၎င်း၏အဓိကမှတ်တိုင်များ
1.1 Estella, Navarrese Romanesque ၏မြို့တော်
1.2 Nájera, Camino de Santiago Frances တွင်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာတစ်ခု
1.6 ဗီလာဖရန်ကာ del Bierzo၊ ပြင်သစ်စန်တီယာဂိုလမ်းရှိဂါလီနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်
2 ဘယ်အချိန်မှာ Camino de Santiago Frances ကိုပိုကောင်းတာလဲ
Camino de Santiago Francés - ၎င်း၏အဓိကမှတ်တိုင်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာတော့ဒီဂျိမ်းကန်ခရီးစဉ်ရဲ့မြို့အချို့မှာရပ်နားမှာပါ။ သို့သော်သင်လုံလုံလောက်လောက်ထက်ပိုပြီးသိပြီးသားမြို့ကြီးများတွင်သာမကကြီးမားသောသမိုင်းဆိုင်ရာအစဉ်အလာရှိသောမြို့ကြီးများတွင်မဟုတ်ပါ။ စလိုက်ကြစို့။
Estella, Navarrese Romanesque ၏မြို့တော်
သူတို့တည်ရှိသည့်သမိုင်းဝင်မြို့တော် Estella ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် Navarrese Romanesque ၏မြို့တော်။ သင်က Pamplona ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ထိုအရပ်သို့ရောက်မည် Navarra ဘုရင်တို့၏နန်းတော်တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်း၌ကျန်ရှိနေသောတစ်ခုတည်းသောလူထုအခြေပြု Romanesque ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၂ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။
၎င်းနှင့်အတူသင်လည်းသိသင့်သည် ရုံး, XVIII ၏ Baroque အဆောက်အ ဦး; အဆိုပါSancristóbal၏, Renaissance နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၎င်း၏umentရာမရိုးရှင်းဘို့ထွက်ရပ်ပေးသော။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအကြွင်းအကျန်များကိုလည်းသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သည် နယူးဂျူးရပ်ကွက်နှစ်ခုကွက်လပ်နှင့်အတူမျှော်စင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Estella ဟာ Camino de Santiago Frances ရဲ့မြို့ကြီးတွေကြားမှာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဖြစ်လိမ့်မယ် ကြီးမားသောဘာသာရေးအမွေအနှစ်။ ၎င်းသည်အသင်းတော်များကဲ့သို့သောအသင်းတော်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် San Pedro de la Rúaခမ်းနားထည်ဝါသောလေ၊ ၏ သန့်ရှင်းသောသင်္ချိုင်း၎င်း၏အထင်ကြီးနက်ရှိုင်းစွာမီးလောင်ရာ Gothic portico နှင့်အတူ; ၏ san Miguelthe ၀ ံဂေလိဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ၏ စန်း Juan၎င်း၏ neoclassical မျက်နှာစာနှင့်အတူ Puy ၏ Basilica, XNUMX ရာစုအတွင်းပွနျလညျထူထောငျ။
ထို့အပြင်ဘာသာရေးအမွေအနှစ်များဖြစ်သည့် Las ကဲ့သို့သောသီလရှင်ကျောင်းများဖြစ်သည် Recoleta Conceptionists၎င်း၏ခံ့ညားမျက်နှာစာနှင့်အတူ၏ Santa Clara၁၇ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအနုပညာလက်ရာသုံးခုကိုတည်ဆောက်ထားသည်။
Nájera, Camino de Santiago Frances တွင်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာတစ်ခု
La Rioja ရှိဤမြို့ငယ်၏သမိုင်းဝင်အရေးပါပုံကိုသင်ပြောပြပါကအချိန်ကာလတစ်ခုအထိသာဖြစ်သည်ဟုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည် Nájera-Pamplona ၏မြို့တော်, XNUMX ရာစုပြန်။ , villa ၌သင်တို့ကိုလှပသောသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် Santa María la Real ၏ဘုန်းကြီးကျောင်းအထူးသဖြင့်ဗိမာန်တော်၊ တော်ဝင် Pantheon နှင့်၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါသော အဆိုပါ Knights ၏ Cloisterသောအားဖြင့်ဝင်ရောက်သော ကားလို့စ်ငါဂိတ် flamboyant Gothic စတိုင်၌တည်၏။
Nájeraမှာအဟောင်းရဲ့အကြွင်းအကျန်တွေကိုလည်းသင်တွေ့သင့်တယ် alcazar; အဆိုပါ သန့်ရှင်းသောလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ဘုရားကျောင်းတစ် ဦး Renaissance ကျောက်မျက်နှင့် Santa Elena ၏သီလရှင်, XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ် La Rioja ၏ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တော်သင်သည်အပင်များကိုနှစ်သက်သည်မှန်လျှင်
ဒီမြို့မှာ Camino de Santiago Frances မှာရိုးရာအစဉ်အလာရှိတယ်၊ ရေဒီယို ဒီဆက်စပ်မှု ဘုရားဖူးကိုမြို့တွင်ကျူးလွန်သောလူသတ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည် သူ၏အပြစ်ကင်းမှုကိုသက်သေပြရန်ဆန်တိုဒိုမင်ဂိုသည်သက်သေပြခဲ့သည် ပြီးသားချက်ပြုတ်ခဲ့ကြက်သားပျံသန်း နှင့်ပန်းကန်ပေါ်။ ထို့ကြောင့်စကားပုံ "ကြက်ကင်ပြီးနောက်ကြက်မသီသီဆိုခဲ့သောစန်တိုဒိုမင်ဂိုဒီလာကယ်လ်ဆာဒါဒါ".
မင်းရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဒီငှက်တစ်ကောင်အမြဲရှင်သန်နေသောနေရာသည်သင်သွားရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Romanesque နှင့် Gothic style များကိုပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း၎င်း၏အပြောင်ဆုံးမျှော်စင်မှာ Baroque ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း၌မင်း၌အံ့ဖွယ်ကောင်းသော Plateresque သံစုံတီးဝိုင်း၊ သူတော်စင်၏သင်္ချိုင်းဂူနှင့်လှပသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှစ်ခုရှိသည်။ Santa Teresa နှင့် La Magdalena တို့၏ရုပ်အလောင်းများရှိသည်။
Santo Domingo de la Calzada မှာလည်းတွေ့နိုင်တယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ခရစ်ယာန်သီလရှင်, Herrerian စတိုင်နှင့်ယနေ့သော parador de turismo နှင့် Cistercian Abbeyတစ် ဦး ခမ်းနား Baroque altarpiece အတူ။
မြို့ပြဗိသုကာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, မြို့အကြီးဆုံးရှိပါတယ် ခိုင်ခံ့သောဝင်း La Rioja တွင်သာမကလှပသောအိမ်များနှင့်လည်းမည်မျှထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ Baroque စတိုင်ဖြစ်ကြသည် မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီ, အ La Ensenada ၏ Marquis အိမ် နှင့်၏ အပန်းဖြေ။ အဲဒီအစား သန့်ရှင်းသောဘုရား၏ညီအစျကို၏အိမ် ၏စဉ် Renaissance ဖြစ်ပါတယ် အသားဟောင်း နှင့် ကားလို့စ် V ၏အတွင်းရေးမှူးနန်းတော် သူတို့ neoclassical ဖြစ်ကြသည်။
၏ Palencia ဒေသ၏မြို့တော် လယ်ယာမြေ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ဤမြို့ငယ်လေးတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Romanesque အဆောက်အအုံများရှိသည်။ သူတို့တွင် Santa María del Camino ၏ဘုရားကျောင်း နှင့်၏ စန်တီယာဂိုCompostela ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိ Portico de la Gloria ကိုပြန်လည်အမှတ်ရသည့်မျက်နှာစာနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်လည်း San Zoilo ၏ဘုန်းကြီးကျောင်း, တစ် ဦး အံ့မခန်း Plateresque cloister ရှိပြီးသော၏ Santa Claraအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် ဗက်လင်မြို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတ၏ဘုရားကျောင်းလှပသော plateresque altarpiece နှင့်အတူ။
Leonino ၏ Camino de Santiago Frances ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်သင်အဟောင်းကိုရောက်လိမ့်မည် Asturica သြဂတ်စ ရောမ မင်းတို့တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုပြသဖို့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထက်မကလိုအပ်တယ်။
သို့သော်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုများမှာ နံရံအဟောင်း XNUMX ရာစုကနေ, perfectlyုံထိန်းသိမ်းထား; က မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီ၁၈ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောနာရီသည်အ ၀ တ်နှစ်ထည်ဖြင့်နာရီကိုခတ်စေသည် ဆေးလိပ်; အသင်းတော်များ စန်းBartolomé y Santa MartaRomanesque ပထမနှင့် neoclassical ဒုတိယ; ၏သီလရှင် ဆန်ဖရန်စစ္စကို နှင့် Sancti ဝိညာဉ်တော် နှင့်အံ့မခန်း အဓိက Seminary က, Herrerian ဆင်တူနှင့်အတူဂန္အဆောက်အ ဦး ။
Astorga ၏ Episcopal နန်းတော်
သို့သော် Astorga တွင်အဆောက်အ ဦး နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းGothic, Renaissance နှင့် Baroque စတိုင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးလှပသော Churrigueresque မျက်နှာစာရှိသည်။ ဒုတိယက Episcopal နန်းတော်ကြီးစွာသော၏အံ့သြဖွယ်အလုပ် အန်တိုနီယို gaudi အရာအပေါင်းတို့သည်သူ၏အဖြစ်စတိုင်အဖြစ်ခွဲခြားလို့မရပါဘူး
ဗီလာဖရန်ကာ del Bierzo၊ ပြင်သစ်စန်တီယာဂိုလမ်းရှိဂါလီနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်
ငါတို့ရပ်လို့ရတယ် ပုသိမ် မင်းရဲ့အထင်ကြီးစရာ Templar ရဲတိုက်၊ ချာ့ချ်များနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအကြောင်းပြောပြရန်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျအနညျးငယျမသိရသျောလညျးလှပသောလှပသောနောကျထပျမွို့တခုကိုအာရုံစိုကျဖို့သှားလိုသညျ။
Villafranca del Bierzo ဟာအားလုံးပါပဲ သမိုင်းဆိုင်ရာအနုပညာ Complex။ ဤသည်ကဲ့သို့သောအံ့ဘွယ်သောအမှုကြောင့်ဖြစ်သည် စန်တာမာရီယာက de Cluny Collegiate ဘုရားကျောင်းcenturyရာမ ၁၆ ရာစုအဆောက်အ ဦး၊ က San Nicolás၏ဘုရားကျောင်း - သီလရှင်အဘယ်သူ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် El Escorial စံပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်; က ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ခရစ်ယာန်သီလရှင်၁၃ ရာစုတွင်Doña Urraca မှတည်ထောင်ခဲ့သည် Villafranca ၏ Marquis ၏ရဲတိုက်, ပဒေသရာဇ်စတိုင်အတွက်ယခင်တ ဦး တည်းအပေါ် XNUMX ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Camino de Santiago Frances ၏ဂါလိလဲနယ်တွင်သင်သည် Samos သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ Lugo။ ၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသည် Sierra del Oribio နှင့် Piedrafita တောင်များ။ အထဲတွင်သင်အထင်ကြီးကြည့်ဖို့ရှိသည် စိန့်ဂျူလီယန်၏ဘင်နီဒစ် Abbey, အဘယ်သူ၏ဇစ်မြစ်မှ XNUMX ရာစုမှစ။
၎င်းသည်မရောက်ရှိမီအရေးပါဆုံးမြို့ဖြစ်သည် စန်တီယာဂိုက de Compostela။ အထဲတွင်သင်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည် Vilar de Donas ၏ Romanesque ဘုရားကျောင်း, XNUMX ရာစုအလယ်၌တည်ဆောက်နှင့် Pambre ရဲတိုက်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများကြားမှအလယ်ခေတ်ခံတပ်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Camino de Santiago Frances ကိုပိုကောင်းတာလဲ
အခြားဘုရားဖူးသွားလာရန်လမ်းကြောင်းကဲ့သို့ပင် Camino Frances de Santiago သည်အေးသောလများ၌မထောက်ခံပါ။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည်လမ်းလျှောက်ရန်မသင့်တော်ပါ။ ထို့အပြင်မိုးရွာသည့်ရာသီနှင့်လည်းတိုက်ဆိုင်လေ့ရှိသည်။
နွေရာသီလမ်းလျှောက်ရန်မသင့်လျော်ပါ။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကသင့်ကိုပိုပြီးဝတ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ရပ်တန့်ရန်သင့်အားဖိအားပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အလုပ်များဆုံးရက်များ၊ ဘုရားဖူး၏ဘော်ဒါဆောင်.
ထို့ကြောင့်, ပြင်သစ် Way ကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ် နွေ ဦးသင်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည် ဆောင်း ဦး ရာသီ၏ပထမလ.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Camino de Santiago Frances တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးမှတ်တိုင်များရှိသည် ရှုထော၏theရာမအချက်အနေဖြင့်။ မြို့ကြီးများထက်နိမ့်ကျသောမြို့များအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်သည်အမြဲတမ်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်။ လမ်းကိုရိုက်ရတာမခံစားရဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » လမ်းပြ » Santiago ၏ပြင်သစ်လမ်း
မင်္ဂလာပါ ကျနော်တို့ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်, Villafranca ပြီးနောက်ဇာတ်စင်၏အဆုံး - Calixtino codex သည်နှင့်အညီ - Triacastela မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားခြင်းအပြင်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!